Inkcubeko-SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
XY IITORA |Umdlalo weBasketball wobuhlobo kunye ne-COFCO yokubhiyozela iMinyaka eli-100 yokusekwa kweQela- ngo-2021.06
Ukubhiyozela isikhumbuzo seminyaka elikhulu yokusekwa kweQela lamaKomanisi eTshayina, iSichuan Xiangyue Power Component Co., Ltd. kunye neCOFCO Packaging Co., Ltd. ibambe umdlalo wobuhlobo webhola yomnyazi phakathi kwentsimbi yesi-4 neye-6 emva kwemini nge-28 kaJuni.
ngalo mdlalo webhola yomnyazi, siyaqonda ukuba kuphela ngokumanyana kunye nokusebenza kunye apho sinokuthi senze ukuqaqamba.
XY IITORA |2020 IsiShwankathelo soMsebenzi waPhakathi enyakeni kunye nokuHamba intaba-ngo-2020.07
Isishwankathelo somsebenzi waphakathi enyakeni siya kubanjwa qho ngonyaka.Umxholo wesishwankathelo umalunga novandlakanyo nesicwangciso neengcebiso.Inzuzo enkulu yesishwankathelo kukuba inkampani iya kuqokelela iingcebiso ezininzi kubasebenzi kwaye emva koko izalisekise.
Intlanganiso ebibanjelwe kwiNtaba yeQingcheng edumileyo eChengdu ngeli xesha.Emva kwentlanganiso, saba nohambo lwasentlango kwaye sonwabele ixesha elimnandi kakhulu.
XY IITORA |Bhiyozela uNyaka oMtsha wamaTshayina wama-2020-2019.12
Ukubhiyozela unyaka omtsha waseTshayina wama-2020, sonke safumana izipho kwinkampani, kwaye oogxa bethu ababalaseleyo nabo bafumana umvuzo.I-XY Towers ibulele wonke umqeshwa ngomsebenzi wabo onzima kwaye ejonge phambili kwikamva eliqaqambileyo kunye ngo-2021.
XY IITORA |Umnikelo wothando - 2018.02
Ukwazi ugxa wethu uChangquan Zhang, osebenza kwisebe lemveliso uye warhoxiswa kwaye unyango lwechemotherapy lwalufuna iindleko eziphezulu zonyango, umbutho wabasebenzi wenkampani yeXY tower ukhuphe isindululo seminikelo yesisa kubo bonke abasebenzi.Kangangexesha elithile, uninzi lwabalingane bale nkampani baba nenxaxheba kulo msebenzi wothando.Ukususela nge-3 kaFebruwari, i-2018, i-dollar ye-1.6 yeminikelo iqokelelwe .Lo mnikelo udluliselwe ngokukhawuleza ku-Changquan Zhang ukusuka kumanyano wenkampani ukuze unyango.